Imandarmedia.com.np: हस्तमैथुन धेरै गर्नुहुन्छ ? हेर्नुहोस् यस्ता छन् राम्रा नराम्रा कुराहरु !
Lifestyle, Lifestyle News » हस्तमैथुन धेरै गर्नुहुन्छ ? हेर्नुहोस् यस्ता छन् राम्रा नराम्रा कुराहरु !
हस्तमैथुन धेरै गर्नुहुन्छ ? हेर्नुहोस् यस्ता छन् राम्रा नराम्रा कुराहरु !
विर्य मात्र होइन शरीरका कुनै पनि कोसीका, तन्तु या अंग बन्न रगतको जरुरत पर्छ । किनभने रगतबाट नै पोषक पदार्थहरु शरिरका बिभिन्न भागमा पुग्छन र नया कोसीकाहरुको बिकास हुन्छ ।
यस बाहेक सबै हर्मोन, इन्जाइम, शरीरमा बन्ने विभिन्न तरल पदार्थ (जस्तै थुक) लाइ चाहिने कच्चा पदार्थ पनि रगतबाट नै प्राप्त हुन्छ ।
शरीरबाट बाहिर निस्कने पिशाब र पसिना पनि रगतबाट छानिएर नै निस्कने हो। शरीरमा रगतको भूमिका सामान ओसार पोसार गर्ने साधनको रुपमा हुने भएकोले सबै कुरामा रगत महत्वपुर्ण भएको हो ।
आयुर्वेदिक डाक्टरहरुले कहिलेकाही यो धारणालाइ पक्षपोषण गर्दा कतिपय मानिसहरुमा यस सम्बन्धमा गलत धारणा बस्न गएको देखिन्छ । तर बैज्ञानिक रुपमा हेर्दा यो कुरा पूर्ण रुपले गलत हो ।
विर्य बन्ने क्रममा रगत आफैं सिधै विर्य बन्ने होइन । जसरी थुकमा हुने पानी र अन्य तत्व रगतबाट आउछ, त्यसै गरि विर्यको लागि चाहिने कच्चा पदार्थहरु रगत बाट प्राप्त हुने हो । यसर्थ विर्य बन्ने क्रममा रगत नस्ट हुदैन ।
कतिपय मानिसले के कुरामा विश्वास गर्छन भने विर्य एक अमुल्य पदार्थ हो र यसलाई बचाएर राख्नुपर्छ । खास गरेर भारतका बिहार, युपी, हरियाणा बाट सेक्स सम्बन्धि समस्या लिएर डाक्टरलाइ देखाउन आउने मानिसहरु तथा उत्तर भारतमा काम गर्ने नेपालीहरुमा यस्तो विश्वास ब्याप्त पाइन्छ ।
एक थोपा विर्य बन्न ४० थोपा रगतमासी अनि १ थोपा रगतमासी बन्न ४० थोपा रगत चाहिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वासले गर्दा धेरै मानिसले आफुमा आउने शारीरिक मानसिक कमजोरीलाई स्वप्नदोस या हस्तमैथुन संग जोडेर हेर्छन ।
आधुनिक चिकित्सा बिज्ञानका अनुसार विर्य शरीर बाट निस्कनु र शारीरिक मानसिक कमजोरीमा सिधा सम्बन्ध छैन । विर्य शरीरमा जम्मा गरेर पछी प्रयोग गर्ने उदेस्यको लागि बन्ने होइन ।
बिर्यमा हुने शुक्रकिटको आयु २-३ महिना हुन्छ र यदि शरीरबाट निस्केनन भने तिनीहरुको शरीर भित्रै नस्ट हुन्छ । विर्यको मुख्य काम शुक्रकिटलाई बचाएर राख्ने र सेक्सको समयमा महिला प्रजनन अंग भित्र शुक्रकिटलाई शुरक्षित रुपमा पुर्याउने हो ।
यदि यसको काम आएन भने सपनामा या अरु कुनै बेला आफैं लिङ्ग बाट बाहिर आउनसक्छ । यो अर्थमा न त हस्तमैथुनले कमजोरी ल्याउछ, न त स्वप्नदोस नै शरीरको लागि हानिकारक हो ।
यदि विर्य शरीरबाट ज्यादा निस्कदा तागत कम हुने भएको भए शायद कोहि पनि बिहे भएको मान्छे कामकाज गर्न सक्दैनथे होलान । किनभने सबै भन्दा धेरै विर्य सेक्सको समयमा शरीर बाहिर निस्कन्छ ।
पत्रिकाहरुमा सेक्स डाक्टरका नाममा आउने बिज्ञापनहरु, उत्तर भारतमा रेलबाट यात्रा गर्दा आसपासका भित्ताहरुमा लेखिएका सेक्स समस्या र समाधानका बिज्ञापनहरु हेरेर कैलेकाहि मानिसहरुमा के भ्रम पर्छ भने बचपन र युवा अवस्थामा गरिएका हस्तमैथुन सम्बन्धित क्रियाकलापले मानिसको स्वास्थ्यमा साच्चै नै गम्भीर असरहरु पर्छ ।
कतिपय सेक्स डाक्टरहरु त हस्तमैथुन एबम स्वप्नदोसको सफल उपचार गरिन्छ भनेर आफुलाई सेक्स बिशेसज्ञ भनेर प्रचार गरेको पनि देखिन्छ ।
माथि नै भनिसकिएको छ, शरीर बाट विर्य बाहिर जादा त्यसको कुनै दुर्प्रभाव हुदैन । यसर्थ हस्तमैथुन बाट डराउनुपर्ने कारण पनि छैन ।
हस्तमैथुन बिल्कुल सामान्य शारीरिक प्रक्रिया हो । बिबाह हुनु अगाडीका यौन आकांक्षाहरु सरल रुपमा पुरा गर्ने मध्यम हो ।
यसर्थ हस्तमैथुन गरेकोमा आफुलाई बिग्रिएको सोच्नु, नराम्रो मान्नु, दोसी महसुस गर्नुमा कुनै तुक छैन ।
हस्तमैथुन ले नपुंशक बनाउन सक्छ, हस्तमैथुनले सेक्सको क्षमतामा कमि ल्याउछ ।
अगाडिनै भनिएजस्तो विर्य शरीरमा जम्मा गरेर राख्ने अनि पछी धेरै बनाएर प्रयोग गर्ने चिज होइन । यो आबस्यकता अनुसार नियमित रुपमा बनिरहन्छ ।
लगातार हस्तमैथुन गर्दा विर्यको मात्रामा केहि कमि आउनसक्छ, विर्य केहि पातलो लाग्न सक्छ तर यसले प्रजनन प्रकृयामा नुक्सान पुर्याउदैन । केहि दिन हस्तमैथुन नहुदा विर्यको मात्रा र गुण फेरी पहिलाकै अवस्थामा फर्कन्छ ।
यसमा न त गर्भ रहने डर हुन्छ, न त यौन रोग ( जस्तै HIV) सर्ने डर रहन्छ न त अर्को पक्षबाट जबर्जस्तिको आरोप नै सुन्नु पर्छ ।
यस अर्थमा बिना कुनै खतरा यौन इच्छा र तनाव कम गर्ने सजिलो तरिका भएकाले हस्तमैथुन राम्रो कुरा मान्न सकिन्छ
आफैमा नराम्रो नभएपनि कतिपय अवस्थामा यो हानिकारक हुनसक्छ जस्तै सेक्स गर्नमा भन्दा हस्तमैथुन मा धेरै आनन्द महसुस गर्ने अवस्थामा पत्नी संगको सम्बध बिग्रने हुन सक्छ ।
साथै हस्तमैथुन यति गर्नुपर्ने कि जसको कारण आफ्नो दैनिक काममा असर पर्ने भएमा पनि राम्रो होइन । कतिपयमा यौन आनन्दको लागि नभई मनमा बार बार आउने अनचाहे विचारलाइ कम गर्न अर्थात् टेन्सन कम गर्न हस्तमैथुन गर्नै पर्ने मानसिक समस्या पनि हुनसक्छ जसलाई Compulsive Masturbation भनिन्छ। तर यी समस्याहरु निकै कम मानिसलाई मात्र हुने समस्या हुन् ।